Doorashada Xiriirka Soomaaliyeed ee Shataranjiga oo la shaaciyay xilliga ay dhaceyso | Somchess.net
You are here : Somchess.net » wararka » Doorashada Xiriirka Soomaaliyeed ee Shataranjiga oo la shaaciyay xilliga ay dhaceyso
Posted On Monday, April 22, 2013 By admin. Under wararka
Guddoomiyaha Xiriirka Shataranjiga Soomaaliyeed Md. Axmed Cabdi Xasan (Wataac) ayaa shaaca ka qaaday in dhowaan ay dhaceyso doorashada xiriirkaasi, isla markaana la soo dooranayo guddoomiyahay xiriirka Shataranjiga Soomaaliya.
Waxa uu sheegay in doorashada ay ka qeyb qaadanayaan Xiriirada kala duwan ee GOS, madaxda sboortiga, guddiyada kala duwan ee xiriirka Shataranjiga Soomaaliya, wuxuuna Guddoomiye Wataac sheegay inuu ka mid yahay musharaxiinta u taagan inay mar kale hoggaamiyaan xiriirkaasi.
“Doorashada Guddoomiyaha Xiriirka Shataranjiga Soomaaliya laba bil kaddib waxaana ahay musharax u taagan inuu mar kale hoggaamiyo” ayuu yiri Guddoomiyaha Xiriirka Shataranjiga Soomaaliya Md. Wataac oo sheegay in haddii doorashada looga guuleysto uu la shaqeynayo mas’uulkii loo doorto jagadaasi.
Xiriirka Shataranjiga Soomaaliya oo ka mid ah xiriirada dalka ka jira ayaa tan iyo markii la asaasay waxa uu dalka ka hirgeliyay ciyaarta Shataranjiga, iyadoo tan iyo markii Md. Wataac loo doortay xiriirkaasi uu ku guuleystay in ciyaarta Shataranjiga uu ku baahiyo magaalada Muqdisho iyo qaar ka mid ah gobolada dalka.
Goobaha ugu waaweyn ee Xiriirka Shataranjiga uu la leeyahay wada shaqeynta iyo iskaashiga lagu dardar barashada ciyaarta Chess-ka waxaa ka mid ah Dugsiyada, Hoteelada iyo dhammaanba meelaha ay isugu yimaadaan bulshada.
« Xulka ciyaartoyda Shataranjiga Soomaaliya oo la ciyaaray shan dal tartanka All Arab Games
Macalin la ganaaxay digniin culusna loo diray »